Chii Chandinofanira Kuziva Usati Ndatenga Peptide Alarelin?
1. Chii Chinonzi Alarelin?
3. Kushandiswa kweArerelin
4. Alarelin Ushandiso hweTeferensi
7. Alarelin Zvirongwa Zvokuchengetedza
Gonadotrophin-releasing hormone (Alarelin) inogona kurondedzerwa seyakagadzirirwa LR-RH agonist, iyo inoshanda nekukurudzira kugadzirwa uye kusunungurwa kweLH neFSH kubva kumaronda ako epituitary. Mushonga unozivikanwa nokuda kwekunyorwa kwawo kwekuvhunga pamwe nekurapa kwe endometriosis. Chirwere ichi chave chiri kuunza zvibereko zvakanaka kubvira apo zvakawanikwa kuti zvinogona kunge zvakabatsira zvikuru zvekare sekurwisana nekukwegura kuwedzera. Alarelin inowanika mune zvose zviri muIndaneti uye zvepanyama. Zvisinei, nguva dzose ita nechokwadi chokuti Unotenga Alarelin kubva kune A reliable Alarelin manufacturer. Alarelin inotengeswa inogona kusiyanasiyana kubva kune mumwe mugadziri kuenda kune imwe maererano nehutano uye mutengo. Kune zvakawanda Alarelin vatengesi pamusika asi tora nguva yako kuti utsvake zvakanakisisa. Quality zvinodhaka zvinotsigira hukuru hweArerelin.
Alarelin (79561-22-1) mafomu aripo mhuka uye anoshandiswa kuita kuti kuve nekuvharidza kwevakadzi. Alarelin synthetic versions inogadzirwa uchishandiswa mutsigiri weLH-RH akaiswa muhombe huru yepamusoro kune yakasikwa LH-RH inogona kuwanika mugonadotropins zvinyorwa mu vitro kana kuti inokonzera kuvhara. Alarelin basa ndokuita kuti pituitary gland yako ibudise zvakawanda FSH-LH.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, Alarelin, kana ikangopinda mumuviri wako, inokurudzira zvipembenene zvako zvepituitary kuti uwane mamwe maLyminium (LH) uye Follicle-stimulating hormones. Mahomoni maviri anoita basa rinokosha muhupenyu hwose hunogadzirwa nemukadzi. FSH mazano ekukura, maitiro ekuberekorora, uye kupararira kwekushambadzira. Kune rumwe rutivi, muvakadzi, HH hormone inokonzera kukura kwe corpus luteum pamwe nekuita maitiro. Pamusoro pevarume, Alarelin anoshanda nekusimudzira kugadzirwa kwe testosterone hormone. Kuti uite kubudirira kwekuberekwa kwemuviri, muviri wako unofanira kunge uri mukana wekubereka zvakakwana LH neFSH. Peptide Alarelin inogona kubatsira zvikuru mukusimudzira kugadzirwa kwemashure maviri anokosha. Zvisinei, iva nechokwadi chokuti iwe unotora mushonga uyu pasi pegwaro rechiremba kuti urege kuva nematambudziko makuru. IArerelin inoshanda zvakanaka kana iwe uchitora chirongwa chakanaka uye unamatira kuraira yako yekushandisa yaArerelin. Iwe unogonawo kubvunza mutengesi weArerelin zvakawanda pamusoro pemishonga kana iwe uchida chero humwe huri kujekeswa.
Alarelin inowanzoshandiswa kutsvakurudza nezvezvokurapa kuti inzwisise mishonga yezvinodhaka pamutumbi wemhuka zvakanyanya kuitira mamiriro akafanana nekudzidza kubereka. Saka, kure, chirwere ichi chakaonekwa kuti chiri pakati pezvakanakisisa zvekuwedzera kubatsira masimba evanhu, kunyanya vakadzi, pakuvandudza mararamiro avo ekubereka. Varume vanogona kushandisa zvakare chirwere ichi kuti kuwedzere kugadzirwa kwe testosterone hormone. Alarelin yekushandisa inobva pane chiremba chako chiremba. Mushonga uyu unowanika muhupfu uye majowa mafomu. Chiremba wako achava munhu akakurudzira kuti akutungamirire muArarelin yekushandira kwehutano hwako pashure pokunge uchitanga kuongororwa kwechiremba. The raw Alarelin powder chirwere chinoshandiswawo kubata chirwere cheEndometriosis kana Hysteromyoma.
Nokuda kwejojo, iwe unofanirwa kuronga nguva dzose Alarelin mero uye uwane jira kubva kumishonga yako. Iwe unogona zvakare kuzvivhura kubva kumba asi iva nechokwadi chokuti chiremba wako anokudzidzisa iwe usati watanga kuisa dheji. Yeuka, hauna kuvepo Alarelin kushandiswa zvinogonawo kuva zvinokuvadza kuhutano hwako kana kuti zvinogona kutungamirira kune zvimwe zvinetso zveutano. Kutenga Alarelin kutengeswa pamusoro pekambani kunogonawo kunge kune ngozi kana iwe uri kuwana kubva kune kambani iwe usingagoni kuvimba nayo. Mumwe anonzi Alarelin anozvigadzirisa anofanira kukupa iwe nemishonga yekushandisa mutungamiriri. Chiremba wako anofanirawo, anokubatsira pakutengesa zvakanakisisa peptide Alarelin kana iwe unogona kuzviwana zviri nyore kubva pawebsite yedu.
4.Alarelin Ushandiso hweTeferensi
Alarelin inofanira kushandiswa nenzira inotevera;
Tora gorosi yewaini kumunhu anochera zvese zviri zviviri zve diluent uye peptide vial
Iye zvino iva nechirwere che 1cc uye tora diluent yako yaunoda. Sarudza chiyero chakanaka sezvinorayirwa nachiremba wako uye usapinda zvishoma kana kupfuura zvinorehwa; iyo inogona kutungamirira kumagumisiro kana kukundikana kusvika pane zvaidiwa Alarelin chigumisiro.1 ml kana (cc) pamusana pe10mg vial ye melanotan zvinoreva kuti yako Alarelin muyero inofanira kunge yakapoteredza makirumi gumi paU100 slin seringe yakaenzana ne1mg yeMelanotan. Kune rumwe rutivi, 2 ml 9cc) ne10mg yean melanotan zvinoreva chikamu chimwe nechimwe pamakumbo eU100 akafanana ne1mg melanotan.
Mushure mezviito zvose zvakasarudzwa, zvino tora neta yako iyo ine diluent uye iisvitse muhuni yako yakakanyiwa poda uye rega iyo inoputika iputse peptide yako.
Kana imwechete iyo inenge yakawedzerwa muhombodo, iko zvino zvinyoronyoro inogadzirisa mhinduro asi usaiswededze nesimba zvakasimba kusvikira mapurusi ese eyoyopilizedza apera uye iwe unogara wakanyatsojeka
solution. Iye zvino Alarelin yako yakagadzirira kushandiswa
Tenga Alarelin kubva kune mutengesi ane ruzivo uye akavimbiswa kuti iwe unakidzwe nehukuru hukuru hweArerelin. Zvakanakisa Alarelin inotengeswa anofanira kupa zvinotevera zvinowanikwa;
Inovandudza maitiro e testosterone mumarume
Mushonga wacho uri nyore kushandisa, uye unobata Endometriosis muvakadzi. Ingoita kuti uve nechokwadi chekutevera nekubatanidza uye Alarelin dosagein miitiro yemigumisiro iri nani.
Inosimudzira pituitary yako gland kuti ibudise zvakawanda LH neFSH.
Anonunura unhu uye nguva refu kwenguva yakareba kana uchishandiswa zvakanaka.
Mushonga wacho unowanikwa nyore nyore pa webusaiti yedu, uye tinoitawo nekukurumidza kununura.
Kungofanana nemamwe mapeptidi, Alarelin inogona kubatsira mukuderedza zviratidzo zvekukwegura.
Nzira yakanakisisa yekuberekorora zvinetso mumadzimai.
Kunze kweainzi Alarelin inobatsira, ichi chinodhaka chinewo rutivi rwemafu kana zvakadaro pavanopfuura. Zvisinei, miviri yevanhu yakaita zvakasiyana nemiti yakasiyana-siyana. Vamwe vanhu vanowanzova nemigumisiro shoma apo vamwe vangave vane ruzivo rwakashata kunyange mushure mekutevera kodzero yeArarelin application. Izvo zvinoshandawo kune Peptide Alarelin vashandisi uye kutarisa kuongororwa kwechigadzirwa, iwe uchaona kuti vazhinji vevashandisi vezvinodhaka vanofara nemishonga, asi chikamu chevashandisi chakave nechiitiko chakashata pamwe nekuwedzera kumwe. Zvimwe zveArerelin madhara madzimai anosanganisira;
Kuwedzerwa kwekuchengetwa kwemvura kunokonzerwa nekudarika kudengesa mishonga
Marwadzo kana tsvina kunopoteredza nzvimbo yejojo
Zvinogona kutungamirira ku kuora kurasikirwa / kuwana.
Kune rumwe rutivi, kune zvimwe zvakaoma Alarelin migumisiro yemazuva aunogona kutora paunenge uchitora deta dzako, uye dzinotarisa kuti muviri wako unopindirana sei nemishonga. Vashandi vanonyanya kuderedza mishonga vanowanzoona kuendeswa mberi kweArerelin madhara, asi haisi nguva dzose. Kana ukaona chero manzwiro kana zviratidzo zvakasiyana-siyana zvibata chiremba wako pakarepo chirwere chisati chakura. Mamwe emigumisiro yakaoma inosanganisira;
Migumisiro haisati iripo kune avo vataurwa sezvo vanhu vakasiyana vane zviitiko zvakasiyana-siyana asi iva nechokwadi chekuti unoenda kuongororo dzenguva dzose dzezvechiremba uchitora chirwere chako cheArerelin.
Mushure mekutora mishonga kubva kuAlarelin mutengesi chikamu chakasara chekuchengetedza ndechekuita kwako wese. Alarelin muumbi ichakuyeuchidzawo nezvekuchengetedza mishonga. Kuchengetedza kwakakodzera kuchakusimbisa iwe hukuru hukuru hweArerelin. Kazhinji, ichi chemishonga chinogadzikana pane firiji yekunze, asi kana iwe uchizoshandisa kwemavhiki matatu, unofanira kuchengeta Alarelin munzvimbo inenge yakapoteredza -18 degrees Celsius. Kwemazuva 2-7 ekushandiswa, 4 digiri Celsius ichava yakanakisisa yekuchengetedza mamiriro. Kana uri kuronga kushandisa mushonga kwenguva refu, zvinokurudzirwa kuti uwedzere mapuroteni ane hutachiona akadai se0.1% BSA HERE. Yeuka kudzivirira kusviba-kunyura kwemagetsi apo uchichengetedza ichi chirwere.
Wei, S., Gong, Z., Dong, J., Xie, K., Wei, M., Zhang, J., & Wang, J. (2012). Migumisiro yeAlarelin inogadzirisa zvirwere zvisingatauriki pazviratidzo zveGnRHR, FSHR uye LHR mu pituitary uye GnRHR kugoverwa mumapapiro emakumbo. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 28(1), 114-120.
Zhang, S., Han, J., Leng, G, Di, X., Sha, C., Zhang, X., ... & Liu, W. (2014). Nzira yeLC-MS / MS yekugadzirisa panguva imwechete ye goserelin uye testosterone mumaplasma plasma nokuda kwekurapa pharmacokinetic uye nezvemaproymodynamic. Nyaya ye Chromatography B, 965, 183-189.
Ararooti, ​​T., Niasari-Naslaji, A., Asadi-Moghaddam, B., Razavi, K., & Panahi, F. (2018). Kukura kwemasimba kunotevera FSH, eCG-FSH uye hMG uye kutora mitezo zvichienderana nekutsvaga kwekutsvaira blastocyst embryos nechepamhi yakakura uye chimiro mu dromedary ngamera. Theriogenology, 106, 149-156.
6 Mikana Inobatsira yeNootropic Sunifiram (DM235) Poda